BORIC ACID DHEGAHA INTA LAGU JIRO UURKA: SUURTAGAL MAAHA INAY QAADDO HOOYADA MUSTAQBALKA, MAXAY YIHIIN SIFOOYINKA ARJIGA, SIDEE AYAY U SAAMEYNEYSAA NAAGTA IYO ILMUHU? - WIXII MARTIDA
Haweeney ku jirta meel xiiso leh ayaa la kulmi karta dhibaatooyinka caafimaad. Maadaama aysan ahayn mid aad u wanaagsan in aad xanuunsato oo aad qaadato daawooyinka inta aad uurka leedahay, waxaa muhiim ah in aad iska ilaaliso naftaada inta ugu badan ee suurtagal ah ee noocyada kala duwan ee xanuunka. Maqaalkani wuxuu wax ka qaban doonaa daaweynta otomaatiga haweenka uurka leh boric acid. Waxay u egtahay in muddo tobanaan sano ah daaweynta caabuqyada xayawaanka, si aan khasaare lahayn, sababtoo ah waxaa loo isticmaalaa daaweynta otitis ee carruurta, laakiin ma aha. Qodobkani, waxaan tixgelineynaa saamaynta boric acid, haddii ay ku dhegto dhegaha xiliga uurka.
Miyuu suurtogal u yahay in la dhimo hooyadeeda mustaqbalka?
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad fahamto sida daroogadu uga caawiso daaweynta otista. Boric acid, oo ah qayb ka mid ah qalabka, wuxuu leeyahay anti-barar, guryaha jeermis dilaya.
Isla markiiba waa in la ogaadaa Dumarka uurka leh waxay isticmaalaan boric acid inta badan.. Sababtoo ah xaqiiqda ah in sayniska iyo daawada ay hore u socdaan, waxaa la ogaaday in boric acid uusan wax dhib ah u gaysan haween uur leh iyo ilmo.
Digniin! Kala doorashada foosha boric acid waxaa lagu sameeyaa oo kaliya marka kiisaskaas aysan jirin wax kale oo keli ah oo kaliya ka dib markaad la tashato takhtar.
Astaamaha isticmaalka boric acid:
xalka waa in loo kululeeyo qiyaastii heerkulka jidhka;
boric acid waa in aan la daadin haddii ay jiraan noocyo kala duwan oo dheecaan ka soo baxa dhegta;
Haddii 3-5 cisho ka dib aan wax horumar ah samayn, markaa waa in la joojiyaa codsiga.
Nidaamka loo isticmaalo borotiinka boricka ah sida dhibcaha dhegta waa sida soo socota:
xitaa haddii hal dheg dhegta uu dhibsado, labadaba waa in la daaweeyaa;
2-4 dhibcood waa in lagu dhajiyo dhagax kasta 3 jeer maalintii;
ka hor inta aanad dhuubin dhegaha, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u nadiifiso, waxaad isticmaali kartaa hydrogen peroxide;
Kadib qaabsocodka wuxuu ka wanaagsan yahay in uu kudhaco kuleylka 15-20 daqiiqo.
Maxaa saameyn ah naagtu haysataa?
Khamriga ugu badan ee waxyeello u keena borotiinka ayaa sababi kara xasaasiyad xasaasiyadeed. Waxaa jiri kara casaan, firiiric meelo kala duwan, xitaa kuwa haweenka uurka leh kuwaas oo waligood falcelin xun u lahayn daawada ka hor. Xaalado dhif ah, suuxdinta jirka ayaa dhici karta, ka dib marka la dhaafo qiyaasta, ama dareenka gaarka ah ee daroogada. Tani waxay dhakhso u dhacdaa, sababtoo ah dhibcaha ayaa si degdeg ah ugu soo baxa unugyada iyo, si waafaqsan, socodka dhiigga.
Dumarka waxaa laga yaabaa inay dareemaan lallabbo, madax xanuun. Tani waa khatar sababtoo ah muddada borotiillada ee borotiinka ee jidhka bini'aadanku waa 5-6 maalmood. Saameynta isugeynta ka dib isticmaalka soo noqnoqda ee acid waxay noqon kartaa mid aad u xun.
Ilmo ku jira ilmo-galeenka ayaa sidoo kale laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho saameynta daawooyinkaas. Waxay noqon kartaa dhammaan noocyada dareen-celinta xasaasiyadda (firiiricyo, casaan maqaarka). Iyada oo taxaddar weyn u baahan tahay inaad isticmaasho boric acid, marka ilmaha caloosha lagu ogaado cudurka kelyaha, nidaamka kaadida.
Waa muhiim! Ka hor intaadan isticmaalin daroogo aan khatar aheyn, waa inaad la tashataa dhakhtar, dhakhtarka haweenka.
Sida loo doorto daroogada?
Isticmaalka boric acid 0.5-10% inta badan isticmaala. Tani waa feejignaan aad u sarreeya, waxayna u saameyn kartaa qof caafimaad qaba oo aan la fileynin, gaar ahaan kadib 3-5 maalmood oo daaweyn ah.
Carruurta iyo haweenka uurka leh, waxaa jira 2-3% xal boric acid ah. Doorashadan ugu wanaagsan waxay kuu ogolaaneysaa inaad la qabsato oogada dhegta iyada oo aan wax xun ahayn.
Haddii xaaladdu ay aad u daran tahay, waxaad dhigi kartaa 5% xalka dhegaha dhowr jeer., daroogada waa in lagu hagaajiyaa bukaanka.
Isbarbardhig ammaan ah
Sida daroogooyinka badan, boric acid waa analogues. Asal ahaan, waxay ku jiraan waxyeelo baaxad leh, ha u keenin xasaasiyad. Otipaks ayaa ku habboon, maxaa yeelay waxaa loo isticmaali karaa labadaba dumarka uurka leh iyo carruurta. Waxay ka kooban tahay lidocaine (suuxdinta) iyo phenazone (anti-barabar). Anauran iyo Otofa ayaa sidoo kale si habboon u beddeli doona acid-si fiican loo yaqaan. Ugu dambeyntii, waa in la ogaadaa in, inkastoo sun ah ee sunta boric acid, waxaa si weyn loo isticmaalaa daaweynta otitis